Le ncwadi yonke isahluko kwintsebenziswano ubunzima, kodwa ke le ncwadi ngokwayo yintsebenziswano ubunzima. Njalo nje le ncwadi ayizukubakho Akusilungele na ngenkxaso nesisa abantu abaninzi emangalisayo kunye nemibutho. Ngenxa yoko, mna Ndinombulelo kakhulu.
Abantu abaninzi yanika ingxelo malunga enye okanye ngaphezulu kwezi izahluko okanye yandiswa iincoko nam malunga ncwadi. Ndinombulelo lon Baracas, Tom Boellstorff, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock noDalton Conley, Yo-Yo Chen, uEtan Fast, uNick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Sharad Goel, Jake Hoffman, noYohana Huey , Patrick shizuka, Ben Jones, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, uDavide Lee, uAmy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Dai Li, uKaren Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, uJohn uLevi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan uGina Neff, Cathy O'Neil, uNicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah sityhili, jaon van de Rijt, uDavide Rothschild, uBill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart, uMikayeli Szell, Sean Taylor, Florencia oiseaux, Rajan Vaish, Taylor Winfield, Han Zhang, kwaye Simone Zhang. Ndithanda ukubulela abafundi Sociology 503 kwi Spring 2016 ukuze bakwazi ukufunda ngoguqulelo lwe-ngqangi kwangethuba, kwaye abafundi ngokwamaqela bam kule minyaka abakuncedileyo imilo uninzi lweengcamango kule ncwadi.
Mna waba workshop incwadi ngqangi emangalisayo leyo ezaziqhutyelwe kusingathwa Center Princeton ukwenzela Study of Democratic Politics. Ndingathanda ukubulela Marcus Ngaphambi kunye Michele Epstein inkxaso le nkomfa. Ke, ndingathanda ukubulela bonke abathathi-nxaxheba abathe bathatha ixesha ebomini babo bexakekile ukundinceda ukuphucula ncwadi: Elizabeth Bruch, uPawulos DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, uKaren Levy, Mor uNahaman, Sean Taylor, uMarkus Phambi, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts, kwaye Han Zhang. Ngokwenene Yayiyimini emangalisayo, yaye ndiyathemba ukuba ndiye ndakwazi ukusa ezinye kobulumko elo gumbi kwi ngqangi lokugqibela.
A abanye abantu abambalwa bafanele Umbulelo okhethekileyo. Duncan Watts Ebengumcebisi yam yakhe ithisisi, kwaye uphando lwam yePhD ekwenziweni ukuba kwandenza ndaqonda ukuba imincili olu hlobo lophando bekufanele; ngaphandle amava endiye esikolweni graduate kule ncwadi ayizukubakho. Paul DiMaggio waba ngumntu wokuqala andikhuthaze ukuba ukubhala le ncwadi. bonke Kwathi enye kwemini ngoxa bobabini belinde umatshini ikofu Wallace Hall, kwaye nangoku khumbula ukuba kude kwelo xesha, ingcamango ukubhala incwadi wayengazange qatha engqondweni yam. Ngamanye amaxesha xa mna ngenene ukubhala le ncwadi uqalekisiwe uPawulos ngenxa icebiso lakhe, kodwa ngoku Ndimbulela gqitha kuye ngenxa ngokubeyisela ukuba ndakwenza eneneni ndinendawo yokuthetha kwaye ukuba abantu baza kuba nomdla. Nam ndingathanda ukubulela Karen Irhafu ukufunda phantse zonke izahluko kunye neefom yabo yokuqala messiest; wanceda ndabona umfanekiso omkhulu xa waxinga ukhula. Ndingathanda ukubulela Arvind Narayanan ngokundinceda kugxininisa nokucokisa iimpikiswano encwadini phezu zasemini ezininzi ezintle. Brandon uStewart wayesoloko wonwabile lokuncokola okanye ujonge kwisahluko, kunye nokuqonda kunye nenkuthazo yakhe waqhubeka kum ebelisiya phambili, kwanokuba xa uqala angayifuniyo emacaleni. Ke, ekugqibeleni, ndingathanda ukubulela Marissa uKumkani ngokundinceda kunyuka nesihloko kule ncwadi enye kwemini enelanga in New Haven.
Ngelixa ukubhala le ncwadi, wangenelwa inkxaso amaziko amathathu emangalisayo. Okokuqala, kwiYunivesithi Princeton, Ndiyavuya koogxa bam nabafundi kwiSebe wenzululwazi kuba idala kwaye igcina inkcubeko ngokufudumeleyo inkxaso. Ndithanda ukubulela Center for Information Technology Policy for ebonakalalisa wandinika emangalisayo yengqondo ikhaya lesibini apho ndikwazi ukufunda okungakumbi ngendlela izazinzulu computer ukubona ihlabathi. Iinxalenye kule ncwadi apho kwathiwa ngoxa kwi yesabatha ukusuka Princeton. Kuqala, ndingathanda ukubulela Microsoft Research, kwisixeko saseNew York kuba ikhaya lam 2013-14. Jennifer Chayes, uDavide Pennock, kwaye lonke iqela nangentlalo bezibalo bebengabamkeli emangalisayo kunye noogxa. Okwesibini, ndingathanda ukubulela Cornell Tech kuba ikhaya lam 2015/16. Dan Huttenlocher, Mor uNahaman, kwaye wonke umntu Social Technologies Lab kwamnceda Cornell Tech-bume efanelekileyo ukuze kum nilwenze olu ncwadi. Ngeendlela ezininzi kule ncwadi imalunga yokudibanisa izimvo ezivela kwinzululwazi data nenzululwazi kwezentlalo, kwaye ndicinga ukuba Research Microsoft kunye Cornell Tech kukho imifuziselo olu hlobo kwepropathi iLayibhrari yaMaxwebhu.
Ngelixa ukubhala le ncwadi, kwafuneka uncedo uphando elihle abantu abathathu. Ndinombulelo Han Zhang, ingakumbi uncedo lwakhe ukwenza neegrafu kule ncwadi. Ndinombulelo Yo-Yo Chen, ingakumbi uncedo lwakhe lokuyila imisebenzi kule ncwadi. Okokugqibela, Ndinombulelo Judie Miller, ingakumbi uncedo iimpazamo wakhe ekuphawuleni phantsi zonke izinto elayibrari.
Ndafumana ingxelo aluncedo nezimvo ezikule ncwadi eziliqela iintetho. Ndingathanda ukubulela abaququzeleli kunye nxaxheba ziganeko zilandelayo: Cornell Tech izihlanganisi Media Seminar, Center Princeton iSifundo of Democratic Politics Seminar, Stanford HCI kwiNkomfa, eBerkeley Rural kwiNkomfa, Russell Sage Foundation Group Working on Computational Social Science, Princeton DeCamp Bioethics Seminar, Columbia Quantitative Iindlela kwi Social Sciences isithethi Series, Center Princeton for Information Technology Policy Technology and Society Group Ukufunda, Simons Institute ngenxa Theory YobhaloQuery Workshop kwi Directions Elitsha Computational Social Science & Science data, data kunye Society Workshop, University of Chicago, Rural kwiNkomfa, International Conference on Computational Social Science, data Science Summer zeziKolo Research Microsoft, kwaye Society for Industrial and Applied neMathematika (Siam) Intlanganiso yonyaka.
Uguqulelo web le ncwadi wadalwa nguLuka Baker, uPawulos Yuen, kwaye Alan Ritari ye Agathon Group. Ukusebenza kunye nabo kule projekthi Kwakuluvuyo, njengokwamaxesha onke. Enye yezinto endizithandayo malunga neeprojekthi zethu kunye kukuba Ndiyaqhubeka ukufunda intsebenziswano yethu. Ngokukodwa ngakumbi Ndingathanda ukubulela uLuka kuba ekuphuhliseni inkqubo yokwakha le ncwadi endiku- nokukhangela ezimbombeni ezimnyama git, pandoc, uze wenze.
Le ncwadi yaye website ehamba zadalelwa inani leeprojekthi Ikwayimvelaphi evuliweyo. Ndingathanda ukubulela kubanikezeli ukuba ezi projekthi zilandelayo: git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-zigcawu, kumava, kubantu, ibhuthstrephu, Nokogiri, GNU Yenza, Vagrant, Ansible, Latex, kwaye Zotero. Zonke neegrafu kule ncwadi sadalwa R (Team 2016) , yaye wasebenzisa iiphakheji zilandelayo: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , imoto (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , png (Urbanek 2013) , igridi (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) , kunye emojifont (Yu 2016) . Ndithanda ukubulela Yekela Healy sesithuba wakhe blog eyaye kum yaqala pandoc. Ke, ndingathanda ukubulela jaon van de Rijt noDavide Rothschild ngokunika data kusetyenziswa ukuvelisa ezinye kwiigrafu ezivela kwi amaphepha zabo, kwaye ndingathanda ukubulela Josh Blumenstock ngokwenza iifayile totse loluntu iphepha lakhe.
Ngelo Princeton University Press, ndingathanda ukubulela Eric Schwartz bakholwayo kule projekthi ekuqaleni, kwaye Meagan Levinson ngubani kwamnceda ibe yinene. Meagan yaba umhleli ilungileyo yokuba umbhali kufuneka; Ndaziva ngathi kusoloko ke yena kukho ukuxhasa le projekthi, ngamaxesha okulungileyo ngamaxesha ezimbi. Ke, ngoku, xa ndizibona ngokunika ingxelo kwabanye, ndiya kwenza konke okusemandleni am ukusa isimbo Meagan ngayo eyakhayo ngenyameko.
Okokugqibela, ndingathanda ukubulela abahlobo nentsapho yam. Ukuba baye bandikhuthaza le projekthi ngeendlela ezininzi, ngokufuthi ngeendlela ukuba khange bazi nokuba. Ngokukodwa ngakumbi Ndingathanda ukubulela abazali bam, uLaura uBill, kunye nabazali-in-umyalelo wam, uJim noCheryl, ngenkxaso yabo akazange-kuphela xa le projekthi waya kunye kunye. Ndithanda ukubulela abantwana bam. UEli, Theo, anikaceli kwam amaxesha amaninzi xa incwadi yam ekugqibeleni kube ndigqibile. Kakuhle, impendulo ngoku. Yaye, okona kubaluleke kakhulu, ndifuna ukubulela umfazi wam uAmanda. Ndiyazi ukuba le projekthi ibihlanganisa eninzi amahla ndinyuka, kwaye ndiya kusoloko sinombulelo akazange-andahexa uthando lwakho nenkxaso.